Global Voices teny Malagasy » Sahara Andrefana: Tapitra ny fahavaratra ho an’ny ankizy Sahrawi · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Novambra 2018 2:54 GMT 1	 · Mpanoratra Renata Avila Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Espaina, Sahara Andrefana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Tanora, Tsidika, Vonjy Voina
Fotoana hanararaotan'ny olona maro hijerena toerana vaovao, samihafa ny fahavaratra. Mandeha any ivelan'ny sisintanin'ny firenena izy ireo, ary manavatsava fiteny, talaky maso sy rafitrano hafa. Mety hiova ny fiainana mandritra ny fialan-tsasatra fahavaratra, satria tsy azo antoka izao tontolo izao ary maro ireo fanamby ivelan'ny tanindrazana sy ny asa mahazatra. Indraindray mitsidika ny “lafiny hafa” ny olona malaza- toerana izay miatrika fepetra henjana, ary lehibe ny fiantraikan'izany amin'izy ireo rehefa manolo-tena amin'ny zavatra iray izy ireo, tahaka ny nataon'i Javier Bardem  taorian'ny fitsidihana ny tobin'ny mpitsoa-ponenana ao Sahara Andrefana. Manohana ny Todos con el Sahara.ankehitriny ity mpilalao sarimihetsika efa nahazo Oscar ity.
Blogger Viento del Sur manoratra ny firaisankinan'ny mpilalao sarimihetsika iray amin'ny vahoaka Sahrawi. Nilaza izy fa nanambara i Bardem rehefa nitsidika ny tobin'ny mpitsoa-ponenana hoe:
Miharatsy isan-taona ny toe-draharaha. Voasakana ny dingana mankany amin'ny fandriampahalemana ary miantraika manokana amin'ny olona tena marefo izany- ny vehivavy sy ny ankizy ary ny zokiolona, hoy i Bardem, mampahatsiahy antsika fa misy olona 200.000 izay avy any Espaina ary avy eo navela tany amin'ny tany foana 33 taona lasa.
Matetika manintona amin'ny zavatra iray ny anarana malaza. Nitsidika ireo tobin'ny mpitsoa-ponenana tany aloha ireo mpanakanto toa an-dry Manu Chao , sy ilay mpanoratra Eduardo Galeano  ary nanolo-tena tamin'ny zavatra arovana iray, araka ny nolazain'ny Caminando en el desierto  :
Raha toa ireo fanambarana ampahibemaso ireo ka manampy amin'ny fampandrosoana kely ny zavatra arovana iray – dia tsy isalasalàna fa ataon'izy ireo izany- ankasitrahana ny fanehoan-kevitra toy izany. Ary na dia te-hivoatra tanteraka aza aho vokatry ny fitambaran'ny ezaky ny tsirairay eo amin'ireo olom-pirenena amin'ny ankapobeny, dia tsy maintsy manaiky tokoa ny fahamendrehan'izany fanohanana izany isika.
Any Espaina, maro ireo fianakaviana mampiantrano ankizy Sahrawi mba handany ny fahavaratra any an-tranon'izy ireo, ary mizara kolontsaina hafa ao anatin'ny tontolo azo antoka, (azonao atao, ohatra ny mijery ny ankizy Sahrawi any Cordoba ) saingy efa tapitra ny fahavaratra Septambra, ary izao no fotoana hanaovana veloma ny fianakaviana nampiantrano azy ireo, araka ny nolazain'i Amigos del Sahara :
Namarana ny fialan-tsasatr'izy ireo tany Extremadura ny ankizy Sahrawi ary miverina ao Tindouf.
Finiavana roa mahafinaritra no misarika ny sain'ny olona maro ao amin'ny aterineto. Pensilihazo ho an'ny fandriampahalemana (Lápices para la Paz) manohana ireo ankizy miatrika ady mitam-piadiana amin'ny alàlan'ny fanomezana azy ireo pensilihazo sy fitaovam-pianarana ary mahita tantara mahafinaritra tanaty boaty nohavaozina izy ireo :
Ary eto, na dia eo aza ny sesitany maharitra, dia mangetaheta hianatra izy ireo, mitsiky sy faly na inona na inona zava-misy – na dia eo aza ny zava-misy fa mikivilavila ny gorodon'ny sekoly ary tsy marindrano ny latabatra sasany … miala tsikelikely ny loko eny amin'ny rindrina noho ny fahasimbana goavana … dia mbola manoritsoritra ny teny hoe fahalalahana miaraka amin'ireo pensilihazo mahafinaritra izy ireo.
Any amin'ny zoron'ny efitrano fianarana, mahita boaty aho.
Boatina vovon-dronono izany. Ary avy amin'izany, dia ahitana hazo kely maitsomaitso mahafatifaty misy ravina maniry. Nanontaniako hoe inona izany, niteny tamin-kafaliana tamiko ny ankizy hoe: tsiasisa, tsiasisa !!!!
Nitsiky ilay profesora: – “Fomba iray ahafahan'izy ireo mahafantatra fa izao tontolo izao dia tsy tany efitra fotsiny sy toerana tsy dia misy zavamaniry. Nandeha ny andro, tsy maintsy mikarakara ireo zavamaniry ireo ny ankizy mba ho voatondraka hatrany. Tsy maintsy manana fanantenana mandrakariva … “
Finiavana hafa kosa ny Refugees Exhibition , izay ampiantranoin'ny Mpisolovava mpilatsaka an-tsitrapo ao Espaina mandritra ny fahavaratra mba hanangonam-bola sy hanampiana ny Sahrawis.
Mandritra ny fahavaratra, nahita an'i Espaina ny ankizy sasany ary niombom-piainana tamin'ireo fianakaviana mpampiantrano, ny hafa nijanona tany amin'ny tobin'ny mpitsoa-ponenana ary faly nahita an'i Javier Bardem ivelan'ny efijery lehibe (fahitalavitra). Dingana tsikelikely hanampiana azy ireo hanana fahazazana ara-dalàna ao anatin'ny ady mitam-piadiana izany. Ary ankehitriny, miverina any an-tsekoly ao amin'ny tobin'ny mpitsoa-ponenana izy ireo, mampiasa ny pensilihazon'izy ireo vaovao sy mianatra momba ny tontolon'ny teny.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/11/22/130764/
 Javier Bardem: http://www.answers.com/Javier%20Bardem
 tobin'ny mpitsoa-ponenana : http://vientodelsur.wordpress.com/2008/05/05/todos-con-el-sahara/#more-310
 Manu Chao: http://www.answers.com/Manu%20Chao
 Eduardo Galeano: http://www.answers.com/Eduardo%20Galeano
 Caminando en el desierto : http://campilloje.blogspot.com/2008/08/bardem-el-shara-y-un-recordatorio.html
 (azonao atao, ohatra ny mijery ny ankizy Sahrawi any Cordoba: http://www.freesahara.org/despedida_de_los_ni%C3%B1os_y_ni%C3%B1as_saharauis_que_pasan_sus_vacaciones_en_c%C3%B3rdoba
 Amigos del Sahara: http://saharaui.blogspot.com/2008/08/de-regreso-al-desierto.html
 tantara mahafinaritra tanaty boaty nohavaozina izy ireo: http://mm-cuadernodebitacora.blogspot.com/2008/05/el-bote-de-lentejas.html
 Refugees Exhibition: http://www.refugiadoseneldesierto.com/